Copy/Paste » မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ (၂)	20
Nan Shin says: တပိုင်းကြောင် ကျက်စာရရုံနှင့်၊ ခက်ပါလှ သဘောဉာဏ်၊ ထက်မာန အပြောသန်တယ်၊ ဒေါသမာန်ထူပွား။ စောဒကတုဘက်လာလျှင်၊ သူ့ထက်ငါ ငြင်းတဲ့လူစား။ … ။ ဘုရားဟော မြတ်ဓမ္မက္ခန်ကို၊ တတ်လေဟန် ရောင်ဝါး၊ ပရမတ်ပြန် အကြောင်သမားတွေတို့၊ ထောင်လွှားကြသူ့ထက်ငါ။ အသိဉာဏ် တထွာလောက်ကယ်နှင့်၊ ညှာမထောက် ဟောတတ်လှပါ။ … ။ ပရိသတ် ထောမနာအောင်၊ စောဒနာဉာဏ်အကောက်တွေနှင့်၊ ကန်အကြောက် အတင်း မရှောင်၊ ငြင်းကြလူ့ဘောင်။ ပိဋကတ်အစွယ်ထောင်လျှင်၊ အပါယ်ဘောင် ဆင်းရလိမ့်လေး … ။ … ။
lionking says: အသိဥာဏ် တလံလောက်ပေမယ့်
မှော်ဆရာ says: တယ်ဟုတ်ပါလား နန်းရှင်ရေ…
True Answer says: “သိရခြင်းသည်ပင် အမြတ်ဆိုလျှင် ပရမတ်များကိုသိသော ပရမတ်ဆရာများနှင့် အဘိဓမ္မာစာပေ ပညာရှင်များသည် မြင့်မြတ်သူများ ဖြစ်ရာပါမည်။ အကယ်၍ ဤသူများသည် လောက၌ ထူးချွန်လွန်မြတ်သော လူမြတ်များ မဖြစ်ကြသည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်ပါသည်။ ´´
ဟူပြီး အဆင့် ၃ ဆင့်၇ှိပေသည်။ သုတမယဥာဏ် ဖြင့် သာ အတိုင်းအတာ အထိ ကျေးဇူးကြီးပါသည် ။
မိုးပြာရဲ့လှည့်စားမှုကို သိရှိရန် http://mandalaygazette.com/64548/creative-writing
မောင်မိုးပြာ says: အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမတွေ သူတို့ချင်းမဖောက်ပြန်ကြတာ ဘာ့ကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ။ အမှန်အကန်ကိုသိတဲ့ သညာသိ၊ မဖောက်ပြန်တဲ့ သညာသိကြောင့်မဟုတ်ပါလား။ အသိမှာ မူကြိုအဆင့်ပဲရှိသေးရင်တော့ ဖောက်ပြန်နေကြဦးမှာပါ။ မောင်မိုးပြာတို့သည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ လည့်စားရန်မကြိုးစားပါ။ မိမိတို့သိနေရသော အသိများကို သိလိုသူတွေ သိနိုင်သူတွေ သိကြစေတော့ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ကိုယ့်အသိကို ရိုးရိုးသားသားတင်ပြနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မအဘူးလို့ ယုံကြည်ပါလျှင် မိုးပြာတို့က အမှန်တကယ်လှည့်စားတယ်ဆိုရင် ဘာလို့ကြောက်နေစရာလိုမှာလဲ။
we ren thu says: ကိုမိုးပြာရေ မူကြိုအဆင့်အသိဥာဏ်နဲ့ကလေးလေးတွေက ဖောက်ပြန်ဖို့ ဆိုတာဝေလာဝေး
countryboy says: အဲဒါကိုက အသိဥာဏ်သေးသိမ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ၀င်စားလာတဲ့အချိန် ဆိုရင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ၊ နေထိုင်မလဲပေါ့။ ဒါက ငယ်ကတည်းက သင်ပေးရတာပါ။ လက်ဦးဆရာ မိနှင့်ဘတဲ့၊ လက်ဦးဆရာက မသင်ပြ၊ မသွန်သင် ၊ မဆုံးမရင် မကောင်းတဲ့စိတ် တွေဝင်ပြီး၊ ပြော၊ ပြု၊ နေတွေ လုပ်မှာပါပဲ။ မိနှင့်ဘကလည်း သူ့ရဲ့ကိုးကွယ် အားထားရတဲ့ သူတွေဆီက လမ်းညွန်မပြခံရင် ဘာသိမှာလဲ၊ နောက် ဆရာသမားတွေပေါ့။ အဲဒီ လို အသိဥာဏ်ရှိလို့လည်း ပထမအရွယ်မှာ ပညာရှာ၊ ဒု အရွယ်မှာ စီးပွားရှာ၊ တ အရွယ်မှာ ဘာဝနာပွားတဲ့ ၊ ကိုယ့်ကို ကောင်းအောင်ညွန်ပြတဲ့ တရားကျတော့ နောက်ဆုံးမှတဲ့၊ နောက်ဆုံးဆိုတာ လူမှုရေးရာ၊ ဘာသာရေးရာတွေမှာ နောက်ဆုံး လူတွေဖြစ်နေပြီး အရာမ၀င်တော့တာပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း ချောင်ထိုးထားတာခံရကာ စိတ်ဖောက်ပြန်ကျတာလေ။ ဒါကို သူငယ်ပြန်လို့ ခေါ် တာမဟုတ်လား။ ငယ်စဉ်အရွယ်က အသိမပါလာရင် ပညာလည်း မတရားရှာတာပေါ့၊ စီးပွားလည်း မတရားရှာတာပေါ့၊ တရားလည်း မှားရှာတာပေါ့
မှော်ဆရာသိန်း says: အဲဒီက်ိစ္စကို ကျူးလွန်ရင် မိန်းကလေးကို ချမ်းသာသုရစေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တောင် ရသေး မိုးပြာဆရာတော်က အဲဒီလို ဟောတယ်လို့ ကျွန်တော်လဲ လေ့လာဖူးတယ် ..
Was this answer helpful?LikeDislike 40
thantmonzaw says: ပိုးဖလံမျိုးမီးကိုတိုး
koyo says: လူသားတို့သည် ငြင်းရင်း၊ ခုံရင်း၊ တိုက်ကြ၊ ခိုက်ကြရင်းဖြင့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာကြသည်မှာ လူသားသမိုင်းကို စောင်းငဲ့ကြည်သူတို့ သိမြင်နိုင်ကြပေသည်။ ယနေ့လည်း တိုက်ဆဲ……သို့သော် လူကို ဒဲ့မတုိုက်ကြတော့။ အသိဥာဏ်ဖြင့်တိုက်ကာ ကျွန်ဇတ်သွင်းနေကြလေပြီ……မေ့လျှော့ ပေါ့ဆသူတို့ သတိထားကြပါကုန်လော့။
aungnng87 says: မန်းဂေဇက်က မိုးပြာတွေအတွက်ကြော်ငြာဖို့နေရာတခုနဲ့တူပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေကတော့သိပါရဲ့။ ဘယ်ဟာကအဆိုးအကောင်း၊အကျုိုးအကြောင်း ကောင်းလဲဆိုတာ။
မောင်မိုးပြာ says: မောင်မိုးပြာတို့ရော မန်းဂေဇက်ကို သုံးခွင့်မရှိရတော့ဘူးလား။ အဆိုးအကောင်း အကျိုးအကြောင်းသိတယ်ဆိုလျှင် ဘာတွေကိုစိုးရွှံ့နေကြပါလိမ့်။ မဖတ်သင့်ဘူးထင်ရင် မိုးပြာဆိုတာနဲ့ အသာကလေး ခလုပ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲမဟုတ်လား။
windtalker says: ကဲကဲ..
မောင်မိုးပြာ says: windtalker ကို စေတနာနဲ့ သတိပေးလိုက်ပါရစေ၊ အပွေးမြင်ရင် အပင်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ စကား ကြားဖူးမှာပါ၊ ပြောကြဆိုကြတဲ့ စကားတွေဆိုတာ ကိုယ့်အပင်က အပွေးတွေဆိုတာကိုတော့ သတိရပါ။ လူချင်းမမြင်ရလို့ ကိုယ်ရေးချင်တာရေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ လူတွေက နားလည်သွားကြလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာအတွက် စကားတွေပြောနေကြတာလည်းဗျာ။ အချိန်ကုန်ခံ ငွေကုန်ခံ အပင်ပန်းခံပြီး ပြောနေကြတာဟာ အသိအမြင် တစ်ခုခုရရှိဖို့ မဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ်က ဘာကိုမှလေ့လာစရာမလိုအောင် ပြီးပြည်းစုံ သွားပြီဆိုရင်တောင် တဖက်သူကို စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ပြောနိုင်အောင်လောက်တော့ စိတ်ထားတွေ မြင့်မြတ်ဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်။
windtalker says: ကိုယ့်စာကို တာဝန်ယူရဲတယ်
countryboy says: windtalker ရေ မျက်စိစပ်ရင် မှိတ်တာထားလိုက်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။ စိတ်တော့မဆိုးနှင့်ပေါ့ စာသံတွေက ဒေါသဆီကို ညွန်းနေတယ်နော။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုကို ရှေ့တန်းတင်ပါနော် ကိုကိုနော်
Was this answer helpful?LikeDislike 58
we ren thu says: ၀င်ပြော၇မှာတော့ လန့် တယ်ဗျ မဟာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ ကို ပုတ်ခတ်မိသလိုဖြစ်မှာလည်း စိုး၇သေးတယ်— ခွေးလေးအ၇ိုက်ခံ၇တာ သနားလိုက်တာဆိုပြီး လျှောက်အာကျယ်နေလို့ မဖြစ်ဘူးလေ -ဒီခွေးက အလကားနေ၇င်း လူတကာလိုက်ဟောင်နေတာလား—ခွေး၇ူးလားဆိုတာ အ၇င်ကြည့်၇ဦးမယ် –ဒီမိုးပြာဆိုတဲ့ so-called လူတွေကို တော်တော်မျက်စိနောက်လာပြီ–(မျက်စဉ်းဆေးဝယ်လိုက်ပါ့မယ်— ကြားထဲက ၀င်ဝင်၇ှူတဲ့ အမျိုးတွေက များလွန်းလို့ )
မှော်ဆရာသိန်း says: ဘုရားက လူကိုသတ်မှ ပါဏာတိပါတလို့ ဟောတယ်။ တိရစ္ဆာန်သတ်ရင် ကံမထိုက်ပါဘူး။ အစိုးရပစ္စည်းဟာ လူ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကို ခိုးလို့ ကံမထိုက်ဘူး။ ကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုဟာ ကိုယ့်ကာမပိုင်မဟုတ်သူကို မေထုန်ပြုမှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀မဟုတ်တဲ့အရာတွေကို မမှန်တာပြောလည်း လိမ်ရာမကျဘူး။ မုသာဝါဒမဖြစ်ဘူး။ လိမ်ကောင်းတယ်။ မူးအောင်မသောက်ရင် အရက်သောက်တာက မိတ်ဆွေပေါလို့ စီးပွားဖြစ်တော့ အကျိုးတောင် ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလိုသောက်တာကို ဘုရားက သုရာမေရယလို့ ဟောတာမဟုတ်ဘူး။
“ကာမပိုင်အမျိုးသမီးကို သဘောတူပျော်ပါးရာ၌ အပြစ်မရှိ။ ဆန္ဒကို ဖြည့်စွမ်းပေးသောကြောင့် ကုသိုလ်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။” အပေါ်မှာရေးပြထားတဲ့ အယူအဆမျိုးကိုလဲ မိုးပြာဝါဒ က ဟောမဟော …
ရာဇ၀င်လူဆိုး says: အဟမ်း…ကိုဖိုးကြာ..အဲ ..မှားလို. ကိုမိုးပြာ…။ ကျုပ်ဗမာစစ်စစ်တစ်ယောက်ပါ။ ဒါဆို ဘာကိုးကွယ်လဲသိ။ မျက်ကန်းတစ်ယောက်လို ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော် ..ကျူပ်ကိုယ်တိုင် ဘာသာရေးစာမေးပွဲတွေ အောင်မြင်ပြီးမှ ကိုးကွယ်တာ။ လေ.လာပြီးမှနော်။ သူကြီးကတော.အားလုံး ဗဟုသုတ၇အောင် ခင်ဗျားတို.ဟာတွေ ရေးခိုင်းပေမယ်. အခု အပိုင်း ၄ မှာ ဘယ်သူမှ ???? ကိုဖိုးကြာတို. ကြိုက်တာရေး…။ ကျူပ်ဘာသာမဲ. မဟုတ်ဘူးနော်။ ကဲ ..ဒါဆို ကျုပ်တို. ဟိုး ..အဘိုး အဘေး..ကစပြီး …လူ့ယဉ်ကျေးမှုမရှိခင်က နတ်ဘုရားတွေ ကိုးကွယ်၊ ယစ်တွေပူဇော်…ဒါက အ၇င်ခေတ်။နောက် ဘုရားသခင်များစွာပေါ်လာတယ်…. ကိုးကွယ်ကြတယ်။ အခုခေတ်ကတော်. ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ကိုးကွယ်..ဒီမိုကရေစီ ပဲလေ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အရ ..နတ်ဖုရားကိုးကွယ်..ယစ်တွေပူဇော်တဲ.ခေတ်ကနေ ပြီးတော…ဘုရားသခင်..နောက်… အခုဆို ကမ္ဘာမှာ ဘာသာမဲ.ဆိုတဲ.လူတန်းစားတွေများနေပြီ။ ကဲ..ခင်ဗျား စေတနာမှန်ရင် ဒီစကားတွေပြောနေမဲ. အစား မြတ်စွာဘုရားလို သတ္တ၀ါတွေကောင်းကျိုး(ဗမာပြည် အကျိုး) တစ်ခုခု (လေတွေလျော.ပြီး သယ်ပိုးလိုက်ပါ)။ သိပ်ကျေးဇူးတင်တဲ.။
countryboy says: အကျိုးသယ်တယ်ဆိုတာ ယူချင်တဲ့လူမှ သယ်ရကျိုးနပ်မှာပေါ့၊ ဘုရားကတော့ ဒေ၀ဒတ်တို့အတွက် အကျိုးသယ်ခဲ့ပါတယ်။ မယူတော့ မရဘူးမဟုတ်လား။ လူတစ်ယောက်မှာ အသိဥာဏ်ကသာ အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျ။ အသိအတိုင်း အပြော၊ အပြု တွေ လုပ်တာပါ။ အဲဒါမှာ မှားသိရင် မှားတဲ့ အပြော၊ အပြု၊ အနေတွေ လုပ်မှာပါ။